NY MAHAMAIKA ANAY DIA NY FAMPODIANA AN’I DADA ETO – MyDago.com aime Madagascar
CT BRENDA : AMPY IZAY KA HANDEHA HIFANOME-TÀNANA
Miantso anareo any amin’ny faritany izahay hoy ny Ct Brenda androany Talata 14 janoary 2014 teny amin’ny Magro Behoririka, fa efa mandeha any ny fanasana ataon’ny Ces amin’ny famoahana ny voka-pifidianana amin’ny Zoma izao. Miangavy anareo eto Antananarivo hoy izy hameno ny kianja. Ny toromarika no andrasana dia miainga isika. Ampy izay hoy ity olomboantendry ity ka handeha hifanome-tànana ry Antananarivo. Tsy hametrka ny olona mpangalam-bato isika fa ny antsika dia ny dokotera Robinson.
NY CST IANDRO ROBERT : TSY HANAIKY NY VALIM-PIFIDIANANA TSY ARA-DALÀNA
Mahagaga dia mahagaga hoy izy ny zavamiseho. Hafa ny voasoratra ary hafa ny tenenina, koa tsy hanaiky izany isika. Ohatra hoy izy alaina ny vaton’I Andilamena ka ampitoviana amin’ny vaton’I Moramanga. Atao ahoana ny hijerena fa Moramanga tanàna no ampitoviana amin’I Andilamena ny vaton’I Robinson. Ny tao Andilamena dia nahazo 67% Robinson, tao Anosibe an’ala 28% Robinson koa ahoana no handresen’I Hery amin’izany. Tongava maro hoy ity mpanao politika ity ary miarahaba anareo eto Antananarivo izahay fa tena nanao mafy ianareo. Ianareo no lokomotiva mitarika ny tolona. Tsy hanaiky ny valim-pifidianana tsy ara-dalàna isika, ary tsy manaiky ihany koa ny fanodikodinana ny safidintsika isika. Izahay avy Toamasina hoy izy dia somary narisarisa satria nisy mpitarika tsy nahomby tao.Ankehitriny dia efa misy ekipa mitsangana(komity miaro ny safidimbahoaka) ary ny tenako no filoha mpitarika izany. Tsy matahotra izany miaramila izany aho hoy Iandro fa efa nosamborina.
NY CT DONAZY : TSY HALABATO INTSONY NO MISY FA FANDROBANA VATO.
Izahay vonona foana amin’ny tolona. Tsy rariny loatra rah any fandehan’ny fifidianana teo iny. Raha nifanaraka hoy izy dia fifidianana mangarahara sy malalaka, izay no zavatra notadiavina. Kanefa fantatsika ny zavanisy. Tany amin’ny faritany no tena nanjakan’ny halabato be indrindra. Ahoana no anekena izany, raha mbola olona manana fo mitempo. Novakian’ity olomboantendry avy Vangaindrano tamin’ny vahoaka ny PV tany aminy izay misy ny halabato tao Befotaka, nisian’ny PV efa nasaina nosoniavin’ireo mpikambana ao amin’ny biraom-pifidianana mialoha dia avy eo nentina amin’ny kaominina. Ny solontenan’ny kandida Robinson hoy izy dia terena tsy hiditra ny biraom-pifidianana. Baiko avy any ambony ka ny delege ao amin’ny boriborintany no manao izany. Nisy ny taratasy fanekena hananan’ny delege ka tsy maintsy entina soniavina ao amin’ny delegen’ny boriborintany io taratasy io izay vao afaka miditra ao amin’ny biraom-pifidianana. Tsy nety nanao izany hoy Donazy io tomponandraikitra io rehefa avy amin’ny movansa Ravalomanana. Nisy ihany koa hoy izy Befotaka atsimo ny kandida avy amin’ny MAPAR izay mpanaraka dahalo. Nilaza izy ireo fa rehefa tsy mifisy ny kandida azy ireo dia tifiriny amin’ny basy. Vokatr’izay dia natahotra ny olona tany an-toerana. Tsy halabato intsony no misy fa fandrobana vato. Ny tao Midongy ihany koa dia favori ny kandidantsika. Nampanirahan’ny filohan’ny MAPAR dahalo ilay kaominina dia tsy afaka nifidy ny olona tao. Miantso antsika hoy Donazy hanavotra ny firenena far aha izany no mitohy dia tsy misy ilana fifidianana. Noho izany dia PV sandoka no eo am-pelantànan’ny Ceni-T sy Ces.
CT HILARION : NY MAHAMAIKA ANAY DIA NY FAMPODIANA AN’I DADA ETO
Ny zavamisy hoy izy dia efa nolavin’ny Ces daholo ny fitarainana rehetra napetraka tany aminy. Ny hitako amin’ny gazety dia maro ny olona manao fitarainana fa nisy halabato iny fifidianana iny. Inona moa ny olana hoy ny fanontaniana napetrany raha ampitahaina io, far aha resy sika dia mipetraka, nefa isika tsy ho resy mihitsy. Vao nifidy an’I Beatrice isika hoy izy dia efa fantatra fa niaraniasa tamin’I Hery izy ary niara niasa amin’ny mpangalatra. Raha tena sahy hijoro ny Ces dia ampitahao. Ny tondrozotra dia efa nilaza fa tsy mahazo manatrika fampielezankevitra ny mpitondra. Fantatry ny Sadc izany ka miandry rahoviana vao handray andraikitra. Raha tsiahivina dia nanaiky ho tsy hirotsaka dia mahazo mody dada. Nekena ny Ni Ni , nesorina I Neny. Rehefa nanohana an’I Robinson I Dada dia halabato no natao. Inona hoy Hilarion no nataon’I Sadc. Rehefa hamoaka an’io ny Ces dia angamba efa fitsarana miangatra. Ny mahamaika anay dia ny fampodiana an’I dada eto. Rariny ny vahoaka hoyizy raha hitroatra satria fitaka no natao azy. Ianareo Antananarivo no maro an’isa nifidy any dokotera dia ahoana ny safidinareo. Ny faniriako hoy Hilarion dia mametraka an’I Hery ianareo amin’ny Zoma , izahay mamaetraka an’I Robinson. Nanao antso ho an’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny tenany hoe inona no nataon’ny komity mpanaramaso ny tondrozotra. Tsynivoaka ny gadra politika, tsynisokatra ny radio nakatona, tsy nody I dada; ka izao no niafarany nifamono izao.
LERIVA MANAHIRNA : ADIDINTSIKA NY FAMPODIANA AN’I DADA
Auteur Solo Razafy*Publié le 14 janvier 2014 Catégories Politique
2 pensées sur “NY MAHAMAIKA ANAY DIA NY FAMPODIANA AN’I DADA ETO”
Raha vao misy ny hetsika atao tsika noho ny safidim_bahoaka.Ka mitifitra ny EMMOREG/EMMONAT.Hita_tsika ny misy ny vady aman_janany sy sekolz misy azy.
Mila manao fanomanana ady @ ireo EMMOREG sy EMMONAT ireo mihitsy. Izay mahalala ny adiresy misy azy ireo na any vady aman-jamany dia hapetraho eto fs ilaina foana
Précédent Article précédent : MIANKINA AMIN’NY FANAPAHAN-KEVITRAREO CES NY HAMPILAMINA NA HAMPIKORONTANA NY FIRENENA
Suivant Article suivant : RAVELOSON CONSTANT : RAHA TE HANDAMINA NY CES DIA AVOAHY NY MARINA